Nhoroondo yeEcommerce uye trajectory yayo | ECommerce nhau
Nhoroondo yeEcommerce uye trajectory yayo
Nhasi uno zano rekurarama pasina e-commerce rinoratidzika kunge risingabviri, rakaomarara uye risinganetsi kune vazhinji. Yakanga isiri kusvika makumi mashoma emakore apfuura iyo iyo e-commerce pfungwa yakanga yatooneka.
El ecommerce yakatanga makore makumi mana apfuura Uye, kusvikira nhasi, inoramba ichikura nehunyanzvi hutsva, hunyanzvi, uye zviuru zvemabhizinesi anopinda mumusika wepamhepo gore rega.
1 Zvese zvinotanga nepfungwa yakanaka
3 PaInternet Ecommerce Stores
4 Kudzivirira kutenga online
Zvese zvinotanga nepfungwa yakanaka
Michael Aldrich, muvambi weChirungu, mutsva uye muzvinabhizimusi, anozivikanwa nekuvandudza anotungamira pakutenga pamhepo. Pfungwa iyi yakauya muna 1979 panguva yekufamba nemukadzi wake naLabrador apo Aldrich ainyunyuta nezverwendo rwake rwekutenga zvekudya pasvondo. Iyi hurukuro yakamutsa pfungwa, iyo yaive yekubatanidza terevhizheni kuchitoro chavo kuti vaendese chikafu kwavari. Pakarepo mushure mekukurukurirana, Aldrich akaronga nekushandisa zano rake.
Muna 1982, France yakatanga iyo internet inotungamira inonzi Minitel. Iyo online sevhisi yakashandisa Videotex terminal muchina unowanikwa kuburikidza nhare dzerunhare.
Pakazosvika 1999, anopfuura mamirioni mapfumbamwe emagetsi eMinitel anga agovaniswa uye aibatanidza vashandisi vanosvika mamirioni makumi maviri neshanu mune ino netiweki yakabatana yemuchina.
PaInternet Ecommerce Stores
Pakati pema2000s nema1995s, kufambira mberi kwakakosha kwakaitwa mukushambadzira kweInternet. Mutengesi mukuru wepamhepo pasi rese kubva kuAmazon, yakatangwa muna XNUMX sebhuku repamhepo.
Amazon, iri online chitoro, yakakwanisa kupa exponentially zvimwe zvigadzirwa kumutengi.
Imwe nyaya huru yekubudirira yaive eBay, nzvimbo yepamhepo yekutengesa online yakatanga muna 1995. Vamwe vatengesi vakaita seZappos neVictora Chakavanzika vakateverawo nenzvimbo dzekutenga pamhepo.
Kudzivirira kutenga online
Sezvo vanhu vazhinji uye vakawanda vakatanga kuita bhizinesi online, kudiwa kwekutaurirana kwakachengeteka uye kutengeserana zvakatanga kuoneka. Muna 2004, iyo Kubhadhara Kadhi Indasitiri Ekuchengetedza Standards Council (PCI) kuona kuti makambani ari kutevedzera zvinodiwa zvakasiyana siyana zvekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » Nzira dzokubhadhara » Nhoroondo yeEcommerce uye trajectory yayo
Mhoro. Iwe unogona here kuratidza kwawakawana kwawakawana ruzivo rwechinyorwa? Ndatenda.
Ecommerce kubudirira munyika dzakasiyana